Ọganihu Ọdịnaya SEO: Gịnị Bụ Omume Kasị Mma A Mara Gị?
Ị nwere ike nụworị na ọ dị mkpa ịmepụta ọdịnaya dị mkpa ma bara uru na mgbe niile. Otú ọ dị, ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ na itinye aka na ya, ọ bụ isiokwu, akwụkwọ ozi, akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ihe gbasara ọmụmụ, bụ nanị ọkara agha ahụ. Nkera nke ọzọ na-enweta ọdịnaya ahụ n'ihu ndị na-ege ntị ziri ezi.
N'isiokwu taa, m ga-ekpughe ihe nzuzo nile nke ịnyefe ọdịnaya gị n'aka ndị ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Ya mere, ka anyi malite.
Ụzọ SEO kacha mma iji mee ka ọganihu gị dị ogologo oge mgbe i mesịrị
Ihe na-eme ka engines ọchụchọ dị nnọọ ukwuu bụ na ha ga-adọta ndị ọrụ ọhụrụ ogologo oge ị kwụsịrị ịkwalite ọdịnaya. E gosipụtawo na na mgbakwunye na ịnọgide na-enwe ọdịnaya dị mkpa ma dị ọhụrụ, engines ọchụchọ nwekwara ike ịbara azụmahịa gị uru site n'icheta ndị ọhụrụ na ịbawanye ụma gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ọtụtụ atụmatụ SEO nke ọma, mgbe ahụ, ị ​​ga - ejide onwe gị n'ọrụ ọma SEO ndị e depụtara n'okpuru ebe a.Ebe a bụ:
Isiokwu Mbido ụzọ
Otu n'ime ọrụ SEO kachasị mma ị nwere ike ime iji kwalite ọdịnaya gị bụ iji hụ na ị na-eji okwu ndị ezubere ezu na mkpokọta saịtị gị. Hụ na i tinye mkpụrụokwu okwu dị iche iche dịka akụkụ nke gị. Nke a dị mkpa iji zere nri nri.
Iji chọpụta isiokwu ndị kwesịrị ekwesị nke ga-enyere azụmahịa gị aka na nsonaazụ ọchụchọ ịchọrọ ịchọta ma dozie ihe kachasị mkpa maka azụmahịa gị. Malite site na ịmepụta ndepụta nke isiokwu ndị metụtara ọrụ gị. Mgbe ahụ, dozie isiokwu ndị ahụ dabere na ihe ndị na-esonụ:
Emere na nke ahụ? Dịrị gị mma. Gaa n'ihu na nzọụkwụ ọzọ.
Nkụnye eji isi mee Tags Njikarịcha
Nzọụkwụ nke abụọ bụ maka ịmechapụ aha mkpado gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.Cheta, mgbe ị na-abịa na weebụ weebụ, otu esi edozie na ịkọpụta ọdịnaya gị dị ukwuu. Ejiri H1-H6 aha ọma nyere Google aka ịghọta ihe kachasị mkpa nke isiokwu gị. Nakwa, echefula ịdebe isi okwu na isi gị maka ihe kacha mma SEO.
Tinye Njikọ Ụfọdụ
Ma: ntanetị na ntanetị na-enye uru SEO. Mgbe ị na-ekepụta isiokwu ọhụrụ ma ọ bụ na-ebipụta blog post, tụlee itinye njikọ maka ọdịnaya ndị ọzọ i mepụtara na mbụ - ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma nwee obi. Ka ị na-agbakwunye njikọ njikọta, jide n'aka na ibe weebụ ị na-ejikọ na-enyere onye ọrụ ahụ aka. Nakwa, jide n'aka na ị ga-ejikọta njikọ.
Ndị nwe ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa n'ọtụtụ mba kwesịrị ịchọta ọdịnaya ha. Nke a dị mkpa iji mee ka mgbalị SEO gị dị iche iche. Ọdịnaya njirimara abụghị ọrụ siri ike ma ọlị. Nke a bụ ihe ọ nwere ike ịchọ:
Ịtụgharị nsụgharị na ọtụtụ asụsụ;
Ịmepụta mmelite ọkpụkpọ;
Ịtụle ọdịiche dị na aha ngalaba na nọmba ekwentị.
Ọ bụ ezie na ihe ndị a nwere ike iyi ka ụbụrụ, ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'iji ọdịnaya gị nye ndị na-ege ntị ziri ezi.
Olileanya na ị nwere mmasị na usoro SEO ndị dị n'elu maka mmepe ọdịnaya Source .